nepal stock exchange Archives - Nagarik Today
होम » nepal stock exchange
शेयर बजारमा घट्यो उत्साह, राजश्व पनि घट्यो
by नागरिक टुडे मंसिर २४, २०७८
शेयर बजार लगातार घट्दा यसको असर दैनिक कारोबारमा समेत देखिएको छ । बजार घटेसँगै शेयर लगानीकर्ताहरु निस्क्रिय हुने क्रम बढेको छ भने यसले दैनिक हुने कारोबार संख्या र सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्वमा समेत असर गरेको छ ।
शेयर बजारको सम्पूर्ण लेखाजोखा राख्ने निकाय सिडिएसी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्यका अनुसार गत साउनमा पुँजीगत लाभकर ३ अर्ब २१ करोड थियो । भदौमा घटेर २ अर्बमा झर्यो । ‘असोजमा एक अर्ब हाराहारीमा भएकोमा अहिले त्यो पनि घटेर कात्तिकमहिनामा एक अर्बभन्दा कम छ,’ आचार्यले भने ।
पछिल्लो समय साच्चिकै बजारमा चाम घटेको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । कुनै बेला ३ हजार २ सय अंकमा पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको नेप्से परिसूचक बिहीबारसम्म घटेर २ हजार ४ सय ४९ अंकमा झरेको छ । ६ महिनामा नै यति ठूलो गिरावट आएको हो । उच्च बिन्दु भन्दा नेप्से परिसूचक अहिले ५ सय ५१ अंकले घटेको छ ।
नेप्से परिसूचकमात्रै होइन शेयर लगानीकर्ताहरुको पुँजीकरण समेत १० खर्ब भन्दा धेरैले घटेको छ । ६ महिना अघिमात्रै ४४ खर्बमा पुगेको लगानीकर्ताहरुको पुँजीकरण अहिले घटेर ३४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । दैनिक कारोबार रकम रकममा समेत निकै ठूलो गिरावट आएको छ । कुनैबेला एकैदिन करिब २२ अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा बिहीबारको तथ्यांक लिने हो भने जम्मा २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमात्रै भएको छ । कारोबार संख्या पनि कुनै बेला दिन ३ लाखसम्म पुगेकोमा अहिले ४१ हजारमा घटेको छ ।
बजारमा यति ठूलो असर कसरी गर्यो त ? नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली अहिले पुँजीकरण लगायत सबै सूचकहरुमा गिरावट आउनुको कारण नेप्से परिसूचक नै भएको बताउँछन् । उनका अनुसार नेप्से परिसूचक लगातार घट्दा लगानीकर्ताहरुले कारोबार गर्न पनि हौसिदैनन् । बजार घटिरहदा लगानीकर्ताहरु धेरैजसो पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्छन्, जसको असर कारोबार संख्या र कारोबार रकममा समेत पर्ने उनले बताए ।
हेर्नुस् बजारमा परिवर्तन भएका सूचकहरु
नेप्से परिसूचक ३२०० २४४९
कारोबार रेकर्ड २२ अर्ब (दैनिक) २ अर्ब ६७ करोड (दैनिक)
कारोबार संख्या ३ लाख ४१ हजार
पुँजीकरण ४४ खर्ब ३४ खर्ब
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे अहिले साना लगानीकर्ताहरुको संख्या पनि घटेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेको छ । अहिले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र धेरै संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँमात्रै यस्तो ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । यसले अहिले बजारमा चाम घटेको पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा बोल्दै उनले साना लगानीकर्ताहरुमा उत्साह घटेको भन्दै उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री पाण्डेले अस्वाभाविक मूल्य बढ्नेतर्फ भने ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
लगानीकर्ताको दोष राष्ट्र बैंकमाथि, गभर्नर भन्छन्- बुझेर लगानी गरौं
अहिले बजार किन घटिरहेको छ ? धेरै लगानीकर्ताहरुको सामान्य जवाफ हो– राज्य र निकायको नीति । लगानीकर्ताहरुले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको शेयर बजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र बनाइने नीतिको कारण बजार घटेको निश्कर्ष निकालेका छन् । राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा जाने कर्जाको सीमा अत्यधिक घटाएका कारण बजार घटेको भन्दै लगानीकर्ताहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा पुँजी बजार फोरमका सभापति अम्बिका पौडेल राज्यको नीतिकै कारण बजार घटेको बताउँछन् । शेयर बजारमा पुराना र निकै अनुभवी मानिने पौडेलको बुझाइमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पुँजीबजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ ।
‘स्वाभाविक रुपमा हुने क्रिया र प्रतिक्रियालाई हामी स्वीकार्छौं, स्वीकार्नु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अस्वाभाविक रुपमा हुने सरकारको प्रतिक्रिया सहन गाह्रो परेको छ, टेक्ने हाँगो नैै भाँचिएर अडिएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरु पुगेका छन् । चलिरहेका उद्योग व्यवसायहरुबाट नयाँ उद्योग व्यवसायहरु विस्तार गर्ने क्षेत्र भनेको पुँजी बजार नै भएको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।
मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा त्रैमासिक समीक्षामा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । दुई साता पहिले भएको समीक्षामा राष्ट्र बेंकले शेयर धितो कर्जाको विषयमा केही बोलेन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल भन्छन्, ‘अहिले परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नदेखिएकाले समीक्षा नभएको हो ।’
मौद्रिक नीतिको समीक्षा पछि शेयर बजार लगातार घटिरहेको छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमकी महासचिव दुर्गा तिवारी राष्ट्र बैंकले नीति सच्याउनु पर्ने बताउँछिन् । लगानीकर्ताहरुको निकै ठूलो रकम जोखिममा परेको भन्दै उनले तत्काल नीति सच्याएर लगानीको सहज र राम्रो वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने राम्रोसँग बुझेर लगानी गर्ने हो भने समस्या नहुने बताए । बिहीबार संसदको अर्थसमितिमा बोल्दै उनले सर्वसाधारणमा शेयरबारे सचेतनाको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘बजारमा बुझेर लगानी गर्नुपर्छ, नबुझी लगानी गरे समस्या हुन्छ, यो विषयमा पव्लिक अवार्नेस आवश्यक छ ।’
उनले कोरोना महामारीको समयमा अन्यत्र लगानी नहुँदा शेयर बजारमा लगानी ओइरिएकाले बजार उच्च बिन्दुमा पुगेको बताए । गभर्नर अधिकारीले कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरेर मात्रै लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीले कम्पनीको ग्रोथ कम भएको तर शेयर मूल्य बढेको बढ्यै गर्नु स्वाभाविक नभएको बताए ।
मंसिर २४, २०७८0comment
by नागरिक टुडे मंसिर २२, २०७८
बुधबार पनि शेयर बजारमा ठूलो गिरावट देखिएको छ । शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ५३ दशमलव १० अंकले घटेर २ हजार ४ सय ५५ दशमलव ८० अंकमा झरेको छ ।
‘क’ वर्गका कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ९ दशमलव ३४ अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचकसँगै बुधबार शेयर कारोबार रकम समेत सुस्तायो । दिनभर भएका ४२ हजार ९४६ कारोबारबाट २२६ कम्प्नीका ६५ लाख ६० हजार ९ सय ४७ कित्ता शेयर किनबेच भए । जसअनुसार कारोबार रकम २ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख ९ हजार ६ सय २० रुपैयाँमा रोकिएको छ ।
बुधबार अधिकांश कम्पनीहरुको शेयर मूल्य घट्दा बजार पुरै राताम्मे देखिएको छ । यद्यपि, स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक, मैलुङखोला जलविद्युत्, नेपाल एसबीआई बैंक लगायतको शेयर मूल्य भने बढेको छ । बुधबार धेरै गुमाउने कम्पनीहरुमा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, नयाँ सारथी लघुवित्त लगायतका कम्पनीहरु देखिएका छन् ।
मंसिर २२, २०७८0comment
एक घण्टामै ७२ अंकले घट्याे नेप्से परिसूचक
साताको पहिलो दिन सोमबार पनि शेयर बजारमा उच्च गिरावट देखिएको छ । कारोबार खुला भएसँगै घट्ने क्रम शुरु भएको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक पहिलो घण्टामै ७२अंकले घटेको छ ।
७२ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक २ हजार ४ सय ४१ अंकमा झरेको छ । सोमबार नै २ हजार ५ सय तल झरेको छ । ३ हजार २ सय माथि पुगेको ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको नेप्से परिसूचक पछिल्लो समय लगातार घटेर २ हजार ५ सय तल झरेको हो ।
साताको पहिलो दिन आयतबार नै ७२ अंकले घटेको नेप्से परिसूचक सोमबार पनि लगातार घटिरहेको छ । सोमबार कारोबार खुला भएसँगै घट्ने क्रम शुरु भएको थियो ।